Iindaba -Vavanya ngokuchanekileyo izibonelelo kunye nokungalunganga kweebhayisekile zekhabhoni | I-EWIG
Ibhayisekile yentaba yeCarbon
Ibhayisekile yokuSonga ibhayisekile
Ikhabhoni E Ebhayisikile
Vavanya ngokuchanekileyo izibonelelo kunye nokungalunganga kweebhayisekile zekhabhoni | I-EWIG
Ifayibha yeCarbon isetyenzisiwe kwiibhayisikile njengezinto zobugcisa obuphezulu kule minyaka ilishumi idlulileyo. Ukuthetha ngokungqongqo, ifayibha yekhabhoni ayisiyonto elula yekhabhoni, kodwa ngumxube wezinto zekhabhoni ezidityanisiweyo kwaye zomelezwe nge-epoxy resin emva kokuluka. Kwiintsuku zokuqala zecarbon fiber, ngenxa yezizathu zobuchwephesha, i-epoxy resin esetyenzisiweyo inokubola elangeni. Ngokuqhubela phambili kwezenzululwazi kunye netekhnoloji, ukusilela kwezi zinto zibalaseleyo kuya koyiswa ngokuthe ngcembe. Umzekelo, isakhelo saseJamani K sisebenzisa ibanga le-16K ifayibha yekhabhoni. Amandla ale fayibha yekhabhoni ayodlula naleyo yesinyithi, kwaye inewaranti yobomi bonke.
Ifayibha yeCarbon ayinaempawu zangaphakathi zecarbon kuphela kodwa ikwanokuqhubekeka okuthambileyo kwemicu yelaphu. Ubunzima bayo bungaphantsi kwe-1/4 yentsimbi, kodwa amandla ayo anamandla kakhulu. Kwaye nokumelana kwayo kukuqaqambile, sisizukulwana esitsha sokuqinisa ifayibha. Isakhelo sekhabhoni siphawulwa "ngokulula, ukuqina okuhle, kunye nokufakwa kakuhle kwempembelelo". Ukunika umdlalo opheleleyo kwintsebenzo esemagqabini ye-carbon fiber, kubonakala ngathi akukho lula kangako ngobuchwephesha. Nangona kunjalo, ikhabhoni ifayibha isinezibonelelo ezinye izinto ezingenazo. Inokuvelisa iibhayisikile ezilula ezimalunga ne-8kg okanye i-9kg. Olu hlobo lwebhayisikile engasasebenziyo yekhabhoni lubonisa izibonelelo zalo xa unyuka intaba, kwaye ukunyuka kugudile kwaye kuyahlaziya. Kwaye ngokungafaniyo nezinye izakhelo zealuminium ezikhanyayo, uziva uluhlobo lokutsala umva xa unyuka intaba.
Ngokubanzi, ifayibha yekhabhoni njengezinto zebhayisikile inezi zinto zilandelayo:
Ibhayisikile yeentaba zeCarbon fiberizakhelo malunga ne-1200 gram zibonwe kuyo yonke indawo. Kuba ubunzima bekhabhon bungu-1.6 g / cm3 kuphela, akuselophupha lokwenza isakhelo esimalunga ne-1 kg. Isakhelo sekhabhoni senziwe ngokubeka iifayibha zekhabhoni ngokuchasene nendlela apho uxinzelelo lwenzeka khona ukufumana amandla. Isakhelo sekhabhoni yefayibha silula kakhulu, ngenxa yokuxinana kwayo kunye namandla oqinileyo.
Ukusebenza kokutshatyalaliswa kokutshatyalaliswa.
Inkqubo ye- ibhayisekile ifreyim yekhabhoni iyakwazi ukufunxa ukungcangcazela kunye nokugcina ukuqina okuhle. Eli nqaku lenza ukuba libe ngumgangatho olungileyo kakhulu wenqanaba lokhuphiswano.
3. Izakhelo zeemilo ezahlukeneyo zinokwenziwa.
Ngokungafaniyo nenkqubo yokwenziwa kwesakhelo sesinyithi ngokubanzi, a Isakhelo sekhabhoni yefayibhayenziwa ngokubanzi ngokwenza isikhunta, emva koko uncamathisele i-carbon fiber sheet ekubumbeni, kwaye ekugqibeleni uyilungise nge-epoxy resin. Olu hlobo lwenkqubo yokuvelisa lunokusebenzisa iAerodynamics ukwenza isakhelo ngokuxhathisa komoya kancinci.
Iingxaki ezikhoyo ngale nto ikakhulu zezi zilandelayo zi-4 amanqaku:
1. Ukubala uxinzelelo olunzima.
Isakhelo sekhabhoni yefayibha yenziwe ngefayibha yekhabhoni, ebonakaliswa kukuqina okuqinileyo kodwa amandla e-shear abuthathaka. Ukubalwa koxinzelelo oluntsonkothileyo (ukuqina kobude obude kunye nokuqina kwento esecaleni) ziyafuneka ngexesha lokulungiswa, kwaye iicarbon fiber sheet ziyangqinelana kwaye zenziwe ngokokubala. Ngokubanzi, i-carbon fiber iyayichasa ifuthe lomphezulu kakuhle, kodwa ukumelana kwayo nokugqobhoza kubi kakhulu. Oko kukuthi, ayinamsebenzi ukuba uyawa kwaye udubule ngokuthe nkqo. Ndiyoyika ukuba uza kudibana nelitye elinye okanye amabini angqalileyo kwinkqubo yokuwa ngokuthe tye nangokuthe nkqo. Emva koko inokusonjululwa ngokufaka ngelotha.
2. Ixabiso libiza.
Xa kuthelekiswa nee-alloys ze-titanium, ixabiso lesakhelo sefayibha yekhabhoni siphezulu kakhulu. Ixabiso leiifreyimu eziphezulu zekhabhoningamashumi amawaka, ngelixa ixabiso leKonago's C40 kunye C50 lide lidlule nama-20,000. Yuan. Oku ikakhulu kungenxa yokuba inkqubo yokwenziwa kwesakhelo sefayibha yekhabhoni ifuna umsebenzi omkhulu wesandla, kwaye inqanaba lezinto ezilahliweyo liphezulu kakhulu, okukhokelela kunyuko olukhulu kwixabiso.
3. Kunzima ukutshintsha ubungakanani.
Kunzima ukutshintsha ubungakanani besakhelo ngenxa yokubumba emva kokugqitywa komngundo. Ayikwazi kuphendula kwii-odolo zobungakanani kunye nezitayile.
Iya kuthi mhlophe ngokuthe ngcembe xa ibekwe elangeni. Ewe, le nto inxulumene netekhnoloji yomenzi. Kungcono ungayibeki elangeni. Ezinye iikhabhathi zekhabhoni zifuna nokuba zigutyungelwe rhoqo umaleko okhuselayo.
I-Carbon Fibre yeNtaba yeBike Umthengisi ogqwesileyo e-China (Wamkele ukubonisana kwakho kunye nabafowunelwa kwishishini, yiwei https://www.ewigbike.com/ kwiphepha lethu lasekhaya)
Vavanya ngokufanelekileyo iingenelo kunye d ...
Ngu… ”ngokunzulu kakhulu ...
Ngaba iibhayisikile zeentaba kufuneka zikhethe ibakala ...
Ngaba ikharbhon ibhetele kune-aluminium intaba b ...
Kutheni uthenga ibhayisikile yeentaba zekhabhoni | I-EWIG
Huaguo icandelo park qiuchang dolophu huiyang indawo huizhou isixeko guangdong china
Sitsalele ngoku: 0086-752-2513997